Strong acid cation mgbanwe ...
Adịghị ike acid cation mgbanwe r ...
Mgbanwe mgbanwe anion siri ike ...
MA-407 Resin Họrọ Nhọrọ Arsenic
Iwepụ ARSENIC SITE NKE usoro mmiri
Arsenic bụ ihe na -egbu egbu nke nwere ụkpụrụ dị iche iche. Ụkpụrụ MCL (ọkwa ịta oke) maka arsenic na mmiri ọ forụ forụ maka USA bụ 10 ppb.
MA-202U (Resin Exchange Resion Anion siri ike)
MA-202U bụ ikike dị elu, na -eguzogide ujo, macroporous, Ụdị nke M, resin mgbanwe resin siri ike nke enyere na kloride dị ka mmiri, siri ike, edo edo, okirikiri gbara gburugburu .Ọ nwere nkwụsi ike osmotic dị mma, yana ezigbo njirimara kinetic. A na-eji resin ewepụta uranium site na teknụzụ ime ime nọ na ọnọdụ leaching.
Uranium bụ ihe na -adịghị ahụkebe redioaktivu na -emekarị. Nnukwu uranium n'ime mmiri nwere ike ịbawanye ohere nke ịrịa kansa na akụrụ. Ọtụtụ uranium nke ahụ mmadụ na -eri ma ọ bụ ihe ọ drinkụ drinkụ na -ewepụta ya, mana ụfọdụ na -abanye n'ọbara na akụrụ.
Adịghị ike Isi Anion (WBA) resinbụ s polymer mere site polymerizing styrene ma ọ bụ acrylic acid na divinylbenzene na chlorination,echiche. Ụlọ ọrụ Dongli nwere ike inye gel na macroporous ụdị WBA resins nwere njikọ dị iche iche. WBA anyị dị n'ọtụtụ ọkwa gụnyere ụdị Cl, nha otu na ọkwa nri.
Resin mgbanwe anion na -esighi ike: ụdị resin a nwere otu isi adịghị ike, dị ka otu amino (nke a makwaara dị ka otu amino) - NH2, otu amino nke abụọ (otu amino nke abụọ) - NHR, ma ọ bụ otu amino tertiary (otu amino tertiary) ) - NR2. Ha nwere ike ikewapụ Oh - na mmiri ma bụrụ nke adịghị ike. N'ọtụtụ oge, resin na -emetụta mkpụrụ ndụ acid ndị ọzọ niile na ngwọta. Ọ nwere ike rụọ ọrụ naanị n'okpuru ọnọdụ na-anọpụ iche ma ọ bụ acidic (dịka pH 1-9). Enwere ike ịmalitegharị ya na Na2CO3 na NH4OH.
Oghere dị iche iche nke Dongli nwere ngalaba ọrụ pụrụ iche nke na -enye resins ndị a nhọrọ dị elu maka ọla ndị eburu n'uche. A na -achọta resin chelation n'ọtụtụ ngwa mwepụ ọla na ngwa mgbake, site na mgbake mbụ nke ọla dị oke ọnụ yana mwepụ nke adịghị ọcha nke nwere ike ịdị ka akara.
DL 401, DL 402, DL403, DL 405, DL 406, DL407, DL408, DL410
Resin siri ike nke Anion (SBA) bụ polymer nke polymerizing styrene ma ọ bụ acrylic acid na divinylbenzene na chlorination, amination.
Companylọ ọrụ Dongli nwere ike ịnye ụdị gel na ụdị SBA nwere njikọ njikọ dị iche iche. SBA anyị dị n'ọtụtụ ọkwa gụnyere ụdị OH, nha otu na ọkwa nri.
Acrylonitrile na divinylbenzene na -ejikọ resin ike adịghị ike (WAC) wee jiri sọlfọ acid ma ọ bụ sodium hydroxide mee ya mmiri.
Ụlọ ọrụ Dongli nwere ike nye resins WAC macroporous nwere njikọ dị iche iche na gradings gụnyere ụdị Na, nha ururu na ọkwa nri.
Resin Acid siri ike (SAC) bụ polymer mere site na polymerizing styrene na divinylbenzene na sulfonating na sulfuric acid. Ụlọ ọrụ Dongli nwere ike ịnye ụdị gel na macroporous SAC resin nwere njikọ dị iche iche. SAC anyị dị n'ọtụtụ ọkwa gụnyere ụdị H, nha nha na ọkwa nri.
GC104, NGC107, GC107B, NZC108, GC110, GC116, MC001, MC002, MC003
Ngwakọta resin agwakọta
Dongli dị njikere iji ngwakọta ihe ndina agwakọtara nke ọma kwadebere nke ọma ngwakọta resin dị mma maka ịsacha mmiri ozugbo. A na -ahazi nha nke resin akụrụngwa iji nye ikike dị elu. Ịrụ ọrụ dị njikere iji resin akwa agwakọtara na -adabere na ngwa ahụ. A na -enweta ọtụtụ resins akwa agwakọta nwere ihe ngosi nke na -eme ka ịdị mfe nke ịrụ ọrụ dị mgbe achọrọ ngosipụta ike ọgwụgwụ dị mfe..
Mkpụrụ ndụ Inert na Polymer
A na -eji resins Dongli Inert/Spacer mepụta ihe mgbochi na akwa mgbanwe ion ma debe cha cha mgbanwe ion kpọmkwem ebe ha kwesịrị ịdị. Ha nwere ike chekwaa ndị nchịkọta ala, ndị na -ekesa oke ma mepụta nkewa n'etiti cation na akwa anion n'ime akwa agwakọtara. Resert Inert/Spacer na -abịa nha na nhazi dị iche iche iji kpuchie ọtụtụ nhazi sistemụ.
Ihe mgbakwunye Adsorptive Macroporous
Resong adsorbent nke Dongli bụ chaplet spherical chaplet nwere usoro pore akọwapụtara, kemịkalụ polymer na mpaghara elu dị elu ejiri mee nsacha na mwepụta nke ụmụ irighiri ihe dị n'ime mmiri mmiri.